နိုဝင်ဘာလ 16, 1995 တွင်, Addison, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, Jacqueline ဝီလျံ, 28, သူမ၏ရည်းစား, Fedell Caffey, 22, နှင့်သူမ၏ဝမ်းကွဲအတွက် Laverne ရပ်ကွက်, 24, 28 နှစ်အရွယ် Debra အီဗန်, ရပ်ကွက်ရဲ့အဟောင်းရည်းစား၏အိမျသို့ဝငျ။
10 နှစ်အရွယ်မခင်မာ, 8 နှစ်အရွယ်ယောရှု, နှင့် 19 လအရွယ်ဂျော်ဒန်, ရပ်ကွက်ရဲ့သားဖြစ်ဟုယုံကြည်ခဲ့သူ: Debra အီဗန်ကလေးသုံးယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမလည်းသူမစတုတ္ထကလေးနဲ့အတူကိုယ်ဝန်ကိုးလနှင့်အလုပ်သမားသွေးဆောင်ရှိသည်ဖို့, နိုဝင်ဘာလ 19 ရက်နေ့ကဆေးရုံသွားဖို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အီဗန်များအတွက်ရပ်ကွက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တားမြစ်မိန့်ရှိခဲ့ပါတယ် ပြည်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ ပေမယ့်သူမ၏နေအိမ်သို့အဖွဲ့ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း, ရပ်ကွက်အီဗန်သူမ၏ကလေးလဲလှယ်အတွက် $ 2,000 ကိုလက်ခံအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူမကငြင်းဆန်ခဲ့သည်တဲ့အခါ, Caffey တစ်ဦးသေနတ်ဆွဲထုတ်နှင့်သူမ၏ပစ်သတ်။ ထိုအခါရပ်ကွက်နှင့် Caffey အီဗန်ရဲ့သမီးမခင်မာချအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်သေခြင်းမှသူမ၏ထိုး။
အီဗန်သူမ၏အသက်အဘို့ရုန်းကန်အဖြစ်ထိုနောက်မှ, ဝီလျံ, Caffey နှင့်ရပ်ကွက်ပွင့်လင်းသူမ၏ဖြတ်ဖို့ကတ်ကြေးနဲ့တစ်ဦးဓါးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ယင်းမွေးသေးသောအထီးသန္ဓေသားကိုဖယ်ရှား သူမ၏ဝမ်းထဲကပင်။
Williams ကကလေးငယ်ကိုအပေါ်ပါးစပ်-to-ပါးစပ် resuscitation ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်မိမိအပေါ်အသက်ရှူခြင်းခဲ့သည်တစ်ချိန်ကသူမသည်မီးဖိုချောင်စုပ်ထဲမှာသူ့ကိုသန့်ရှင်းပြီးတော့တစ်ဦးအိပ်ပျော်အတွက်သူ့ကိုဝတ်ဆင်။
မိမိအသေကောင်ကိုမိခင်နှင့်ညီမနှင့်အတူတိုက်ခန်းတွင်ဂျော်ဒန်ထွက်ခွာသည်သုံးကလေးငယ်ကိုဧလိယသည်နှင့်အီဗန်ရဲ့သားယောရှုကို ယူ. န်းကျင်သန်းခေါင်အချိန်, မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏တိုက်ခန်းပက်ထရစ်ဖြစ်သူ Scott ထံသို့သွားလေ၏။ သူမကညဉ့်အဘို့ကိုယောရှုကိုစောင့်ရှောက်လျှင် Williams ကသူ့မိခင်ပစ်ခတ်ဆေးရုံ၌ရှိ၏ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်, Scott မေးတယ်။
သူမလည်းသူမအစောပိုင်းကညဦးယံ၌မွေးဖွားပေးခဲ့ခြင်းနှင့်သူမသူ့ကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်အောက်ပါနေ့မွေးကင်းစကလေးဆောင်ကြဉ်းမယ်လို့ဖြစ်သူ Scott ကိုပြောသည်။
ကြောက်လန့်နှင့်ညဥ့်တစ်လျှောက်လုံးကိုအျောဟစျသူကိုယောရှုသည်, အကူအညီတောင်းအောက်ပါနံနက်ဖြစ်သူ Scott ထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူကသူ့မိခင်နှင့်ညီမသေတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့အမည်ရှိဖြစ်ကြောင်းသူမ၏သို့ပြောသည်။
အုပ်စုသဘောပေါက်ပြီးတာနဲ့သူကသူတို့ကသူ့ကိုသတ်မှထွက်မသတ်မှတ်၎င်းတို့၏ပြစ်မှုများအားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူသည်အဆိပ်သင့်လည်ပင်းညှစ်ခြင်းနှင့် Caffey ကသူ့လည်ပင်းမှာလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းထို့နောက် Williams ကသူ့ကိုကျင်းပခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုသတ်ဖြတ် ။ မိမိအငယ်ရွယ်ခန္ဓာကိုယ်အနီးအနားရှိမြို့မှာတစ်ဦးလမ်းကြား၌ကျန်ကြွင်းခဲ့သည်။
Jacqueline ဝီလျံနှင့် Fedell Caffey
Debra အီဗန်၏လူသတ်မှုနှင့်သူမ၏မွေးသေးသောသူငယ်၏ခိုးယူအချို့သောအချိန်များအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်အတွက်အစီအစဉ်ခဲ့သညျ။ Williams ကသုံးဦး၏မိခင်မဆိုပိုပြီးကလေးများရှိသည်ဖို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် Caffey ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လိုခဲ့ကြပြီးသူတို့သည်ရောနှောကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့နိုင်အောင်အလင်းအသားအရေနှင့်အတူအထူးတဦးတည်း, တစ်ဦးကလေးရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. Williams ကဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။
Williams ကကလေးသြဂုတ်လအတွင်းကြောင့်ခဲ့ကြောင်းသူမ၏ကလေးငယ်ကိုရေချိုးခန်းမှာမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြ, ဧပြီ 1999 ခုနှစ်တွင်အတုတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိမှစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်အောက်တိုဘာလရန်ကြောင့်နေ့စွဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်နိုဝင်ဘာ 1 ရက်နေ့ကသူမတစ်ဦးကလေးယောက်ျားလေးမှမွေးဖွားပေးခဲ့ကြောင်းသူမ၏စမ်းအရာရှိကိုပြောသည်။
သို့သော် Williams ကကလေးခြင်းမရှိဘဲနေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူမ၏အဆိုအရရပ်ကွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူသူမ၏ပေးအပ်သည်။ မိမိအဟောင်းရည်းစား, အီဗန်အသစ်တစ်ခုကလေးယောက်ျားလေးမှမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုတော့ပိုက်ဆန်လျှော်အသစ်တစ်ခုကလေးနှင့်အတူ, Williams ကသူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်ကျော်ခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။ သူမ၏ရည်းစားဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပျော်ရွှင်ခဲ့သူမရဲ့အစမ်းအရာရှိအဖြစ်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှပြသနိုင်ဖို့ကလေးရှိခဲ့ပါတယ်။
ကအီဗန်မှဦးဆောင်ဝီလျံနှင့် Caffey ယုံကြည်သူကို Laverne ရပ်ကွက်, ကိုလည်းသုံးလူသတ်မှုများအတွက်အဖမ်းခံခဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ ဝီလျံနှင့် Caffey သေဒဏ်လက်ခံရရှိပြီးရပ်ကွက်တဦးတည်းဘဝဝါကျပေါင်းနှစ် 60 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 11, 2003 တွင်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ထဲကတစ်ခု-သက်တမ်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ဂျော့ခ်ျဟိုးမားရိုင်ယန်, Sr; အားလုံးလျှော့ပေါ့ သေခြင်းတရားစာကြောင်း ရိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲဘဝကိုစာကြောင်းရန်။ ရိုင်ယန်နောက်ပိုင်းမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွဲချက်များ၏ပြစ်မှုထင်ရှားခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်၌ငါးနှစ်ကြာခဲ့သည်။
ဧလိယသည်ဤလောကသို့မိမိအရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ entry ကိုထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲနှင့်အောက်တိုဘာလ 1996 ခုနှစ်တွင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်, အီဗန် '' အဖေ, ရှမွေလသည်အီဗန်, ဧလိယနှင့်သူ၏အစ်ကိုယော်ဒန်မြစ်မှဥပဒေရေးရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
Berlitz ကလေးများဂျာမန်ဘာသာစကားကို Pack ကို
ဘယ်လို Corporation Capital ကိုဖိအားပေးရန်
အသေးစား Talk ကိုသင်ခန်းစာအစီအစဉ်
6 ဧလိရှဗက်တေလာ, Movies
မည်သို့အသုံးပြုခြင်းကိုဖန်တီးရန်နှင့် Delphi အတွက်ပိတ် Form များ
အထူးပညာရေး: နေရာထိုင်ခင်း, မဟာဗျူဟာများနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ
'' spoofing 'နဲ့' Phishing 'နှင့်အထောက်အထားတွေကိုခိုးယူခြင်း
သင့်ရဲ့အနီးတစ်ဖလော်ရီဒါကယပ်လှေပြိုင်ပွဲ Trail ရှာဖွေလိုက်ပါ!
တစ်ဦးထိတွေ့နိုင်သော, Kinesthetic သင်ယူစတိုင်နှင့်အတူကျောင်းသားများအဘို့အသင်ယူခြင်းအကြံပြုချက်များ
ဂျော့ခ်ျရေလက်ကြား - ဇယားသမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
Decoration - ကိုအလှဆင်ဖို့
အထူးပညာရေးထဲမှာ "Related န်ဆောင်မှုများ" ဆိုတာဘာလဲ
လက်တင် Syllables အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု
တစ်စက်မှုနှင့်တစ်ဦး Electropneumatic Paintball ဂွန်အကြားကွာခြားချက်များ
အဆိုပါဟိန္ဒူ Ramnavami ပွဲတော်: သခင်ဘုရား Rama ၏မွေးနေ့
အဆိုပါမာစတာ၏ palette: ဗင်းဆင့်ဗင် Gogh